ဝါးခယ်မ : ၁၉၄၂ ရခိုင်ပြည်နယ်ဂျီဟတ်လုပ်ခံရစဉ်က - ခိုးဝင်ဘင်္ဂါ လီတို.၏ ရခိုင်သားတို.အပေါ် လုပ်ရပ်များ
၁၉၄၂ ရခိုင်ပြည်နယ်ဂျီဟတ်လုပ်ခံရစဉ်က - ခိုးဝင်ဘင်္ဂါ လီတို.၏ ရခိုင်သားတို.အပေါ် လုပ်ရပ်များ
( လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ခိုးဝင်အကြမ်းဖက်များ၏ တိုက်ခိုက် ခံရမှု များ ရှိနေချိန်တွင် ယခင်သမိုင်းကြောင်းဖော်ပြထားမှု အား မူရင်းအတိုင်း ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။လေ.လာသတိပြုနိုင်ရန်ပါ )
(1942 )ခုနှစ် ကုလားရခိုင် အထိကရုဏ်း စတင်ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းတရားကား စစ်တွေမြို့မှ စတင်ဖြစ်ပွါးလေသည်၊ အင်္ဂလိပ်တပ်ဖြစ်သော ရာခ်ျပုကုလားစစ်သားများက ရခိုင်အမျိုးသမီးများကို အဓမ္မပြုကျင့် ရခိုင်အမျိုးသားများကို ဘင်္ဂလီကုလားအရပ်သားများနှငိ့ ပူးပေါင်း၍ အနိုင်ကျင့် နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ရာမှ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး စတင်ဖြစ်ပွါးလာ ရခြင်းဖြစ်လေသည်။ ယင်းပြသနာသည် မြေပုံမြို့နယ်၊မင်းပြားမြို့နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်များသို့ ကူးစက်သွားသည်။ ယင်းကိစ္စကို ရခိုင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော ဦးပညာသီဟ ၊ ဦးသာကျော်(ဘုံဘောက်)တို့က ဖျန်ဖြေပေးသဖြင့် အထက်ပါမြို့များမှာ အေးဆေးငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါသည်။
သို့သော် အထက်ပါမြို့နယ်များမှ ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောမြို့နယ်များသို့ ထွက်ပြေးသွားကြသော ဘင်္ဂလီကုလားများနှင့် ဘူးသီးတောင် မောင်တောမြို့နယ်များမှ ပညာတတ်ကုလားခေါင်းဆောင်အချို့ဦးဆောင်ကာ နယ်ခံကုလားများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ယင်းဒေသရှိ ရခိုင် ၊ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတိုင်းရင်းသားများနှင့် ကျေးရွာများကို အမြတ်မကျန် ချေမှုန်းသုတ်သင် သတ်ဖြတ်ကြရန် နှိုးဆော်စည်းရုံးကြလေသည်၊ ယင်းအချိန်တွင် မေဂျာ ဦးကျော်ခိုင်(အိုင်စီအက်)သည် ၄င်းကိစ္စကို ထိမ်းသိမ်းရန် စစ်တွေမြို့ မှ ကုလားခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ဦးယာဆိန်း (ရှေ့နေ) ဦးဆူတန်မာမတ် ၊ဦးဘိုးခိုင် စသောသူများ နှင့် ကြိုးပမ်းသော် လည်း မအောင်မြင်သည့် အပြင် (မေဂျာ ဦးကျော်ခိုင် )ကိုယ်တိုင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဂူတာပြင်ကျေးရွာတွင် ကုလား များ၏ ပစ်ခတ်လိုက်သော သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးသွားရလေသည်။
(၁၉၄၂)ခုနှစ် မေလတွင် မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ကုလားကျေးရွာ အားလုံးသည် လူစုရုံးပြီး လက်နက်ကိုင်များကိုင်ဆောင် လျှက် ရခိုင်ကျေးရွာများကို တိုိုက်ခိုက်ဖျက် ဆီး မီးရှို့ခြင်းများ စတင်ပြုလုပ်လာကြသည်၊ရခိုင်ကျေးရွာများကို ၀ိုင်းထားခြင်း ၊ လမ်းတံတားများအား ဖြတ်တောက်ဖျက်ဆီးထားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကြသည်။ မောင်တောမြို့ကို ဒုတ် ဒါး လက်နက် ကိုယ်စီဖြင့် ၀ိုင်းရံထားသည့် ဘင်္ဂလီအင်အားမှာ(၂၀၀၀၀)နှစ်သောင်း ကျော် လောက်ရှိမည်ဟု ခန်းမှန်းကြသည် ။၊မောင်တောမြို့ ၀င်ပေါက် ထွက်ပေါက် အားလုံးကို ပိတ်ဆို့ထားကြသည်၊ မောင်တောမြို့နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများကိုလည်း ကုလား များ ၀ိုင်းဝန်းထိုးခုတ်နေကြသည်ဟု သတင်းများကြားကြရသည်။
ဒါးဒါဏ်ရာနှင့် မောင်တော မြို့ပေါ်သို့ တက်လာ သော သူများမှာလည်း မနည်းလှပါ၊မောင်တောမြို့ အလယ်ရွာက ဟု ထင်ပါသည် အိမ်ထောင်စုတစ်စု မနက်(၄နာရိ)လောက်တွင် ဘူးသီးတောင်သို့ ဖေါက်ထွက်ပြေးကြရာ ကညင်တန်းရွာမှ ကုလားများ ခုတ်လွတ်လိုက်သော ကြောင့် ပါသွားသော ပစ္စည်း များအားလုံးလည်း လုယူခံရပြီး သွေးသံရဲရဲ ဖြင့် မြို့ထဲသို့ ပြန်ဝင်ပြေးလာသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ယင်းနေ့ မိုးလင်းသည့် အချိန်မှ စ၍ ရရာပစ္စည်းများကို ထုတ်ပိုးပြီး ထွက်လာခဲ့ကြ ရာ လမ်းများပေါ်တွင် မိမိကဲ့သို့ အထုတ်အပိုးများဖြင့် ဟိုဟို ဒီဒီ ပြေးလွားနေကြသော ထိတ်လန့် ကြောက်လန့်နေကြသည့် ရခိုင်များ အုပ်စုလိုက် အုပ်စုလိုက် တွေ့ရပါသည်၊ ယင်းအချိန်က အစိုးရကချိတ်ပိတ်ထားသော ဘုန်းကြီးကျောင်း(ယခု (မဟာကျန်ဘုရား ကိန်းဝပ်ရာ အသျှင်ကေတုကျောင်း) ကွက်လပ် တွင် ရခိုင်လူမျိုး(၅၀၀၀)လောက် စုမိလာကြသည်။
မြောက်ဖက်ပိုင်း ကညင်ချောင်းရွာများမှ လူများကို လည်းကောင်း၊ မြို့နှင့်နီးသော တောင်ပိုင်းရွာများဖြစ်သည့် မှော်ဝင်ရွာ ၊မကျီးချောင်းရွာ ၊ ရေဖုန်းပြင်ရွာ၊ ပန်းတောပြင်ရွာ စသော ရခိုင်ရွာများမှ လူများကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။ အသက်ဘေးကို ကြောက်ရွံနေကြသော လူအုပ်ကြီးသည် ကလေးငိုသံ လူကြီးဆူညံသံများနှင့် ပွက်ပွက်ညံနေသည်၊ ထိုနေ့က စက်ရှင်တရား သူကြီး ဦးအောင်သာကျော် ဘူးသီးတောင်ငွေတိုက်မှ ငွေများကို သိမ်းဆည်းရန်နှင့် မောင်တောကို ကုလားများဝိုင်းရံထား ကြောင်း သိရ၍ အကူအညီပေးရန် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ ဥိ၊းအောင်သာကျော်က ဘူးသီးတောင်သို့ ပို့ပေးမည်ဟု ပြောသည်၊
ဘူးသီးတောင်သို့သွားရန် စောင့်နေကြစဉ် မိုးသက်လေပြင်းကျပြိး မိုးအကြီးအကျယ် ရွာနေသော ကြောင့် ဘူးသီးတောင်လမ်းပိတ်နေကြောင်း ကြားသိရပြန်သည်၊ စစ်သားအစောင့်အရှောက်နှင့် မသွားပါကလည်း သတ်ရန် လမ်းတလျှောက်လုံး ကုလားများ စောင့်နေကြကြောင်း ကြားသိရပြန်သည်။
မနက်(၉)နာရီလောက်တွင် ဦးအောင်သာကျော်က နတ်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်း ယခုဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့နိုင်ငံ တက္ကနက်သို့ ပို့ပေးရန် ကြိုးစားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည်၊ နေ့လည်(၁၂)နာရီလောက်တွင် အောင်သာကျော် နှင့်အတူ အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ် တေလာ နှင့် နီပေါ ဂေါ်ရခါးစစ်သားများ ရောက်လာပြီး မောင်တောသင်္ဘောဆိပ်သို့ ပို့ပေးပါသည်၊ အာရကန် ဖလိုတီလာ ကုမ္မဏီ ပိုင် သင်္ဘောဖြင့် အခေါက်ခေါက် အခါခါ ပြေးဆွဲသော်လည်း မနိုင်မနင်း ဖြစ်နေလေရာ လှေသဗ္ဗာန်များနှင့် လည်း ပို့ပေးကြသည်၊ မောင်တောမြို့ တစ်ဖက်ကမ်း ယခု ဘင်္ဂလားဒေခ့်ျ နိုင်ငံ တက္ကနက်သို့ ရောက်၍ မကြာမီ ညဖက်တွင် မောင်တောမြို့ပေါ်မှ နယ်ကျေးရွာများမှ တောက်မီးလျှံများတလိမ့်လိမ့် တက်လာသည်ကို လှမ်းတွေ့မြင်ကြရသည်၊ မောင်တောမြို့ကို ကျွန်တော်တို့ မရှိသည့်နောက်ပိုင်း ကုလားများ ထောင်သောင်းချီ ၀င်ရောက် လာကြရာ ရခိုင်အိမ်များတွင် ရှိသော ဆန် ဆီ ဆား ပုဂံ ခွက်ယောက် အိမ်ထောင်ပရိဘောက များပါမကျန် စိတ်တိုင်းကျ ယူငင်ကြပြီး နောက် အိမ်များ ကျောင်းများကို မီးရှို့ကြလေသည်၊ ဤအရေးအခင်းတွင် နတ်မြစ်ကမ်းခြေမှ ကျေးရွာများ ဖြစ်ကြသော ငါးခူရ ၊ ခြံပြင် ၊ရွက်ညှိုးတောင်၊ သရက်အုပ်၊ စသော ကျေးရွာများသည် လှေများဖြင့် နတ်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်း ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့သို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ကြ သော်လည်း ကမ်းခြေနှင့် ဝေးသော ရခိုင်၊ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်ကျေးရွာများအားလုံးသည် ရွာလုံးကျွတ် အသတ်ခံခဲ့ရလေသည်၊ အချို့ရွာများမှသူများသည် မယူတောင်တန်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဘူးသီးတောင် ဖက်သို့ ထွက်ပြေးကြသည်။ ထိုလူများသည် ဘူးသီးတောင်မြို့အ၀င် လက်ဝဲတက်ကုလားရွာ မှ ကုလားများ ခုတ်၍ သေပွဲဝင်ခဲ့ကြရသည်။
မောင်တောမြို့ တောင်ပိုင်းတွင် အသက်ရှင် လွတ်မြောက်သော ကျေးရွာများမှာ မရှိသလောက်နည်းပါးပါသည် ။ ရွာလုံးကျွတ်လူကြီး လူလတ်၊ လူငယ်၊ ကလေးများအားလုံး ရက်ရက်စက်စက် ခုတ်သတ်ခံခဲ့ရသည်၊ အလယ်သံကျော် ရဲစခန်းကို လက်နက်သိမ်းပိုက်ခံရပြီး ရဲသားများအားလုံးနှင့် သူတို့ဇနီးမယားမိသားစုပါမကျန်၊ ကျေးရွာသားများအားလုံး လည်း သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ကြရသည်၊
မောင်တောမြို့နယ်တောင်ပိုင်း (တပ်ထုံးပြင် ကျေးရွာတွင် ရွာကို ကုလားများ ၀ိုင်းရံထားသောအခါ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ တစ်ရွာသားလုံး လူကြီး၊ လူလတ်၊ လူငယ်၊ ကလေးအားလုံး ပြေးဝင်ခိုလှုံကြသည်၊ထိုအခါ ကုလားများသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဒုတ် ဒါး လက်နက်များဖြင့် ၀ိုင်းထားပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မီးရှို့လိုက်သဖြင့် ကလေး လူကြီး မိန်းမ ဘုန်းကြီး ကိုရင် ဖိုးသူတော် အားလုံး ဦးရေ (၅၀၀)ကျော် အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရလေသည်။ အဆိုပါကျောင်းနေရာတွင် အခုထိ ကွင်းပြင်ဖြစ်နေပြီး မြေကြီးပေါ်တွင် မီးသွေးစများကို တွေ့မြင်နိုင်သေးသည်။)
တဖန် (၁၉၄၂)ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဗိုလ်ရန်အောင် ခေါင်းဆောင်သော ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်အဖွဲ့သည် ဘူးသီးတောင်မြို့ကို သိမ်းပိုက်သောအခါ ဘူးသီးတောင် မောင်တော မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဖြစ်ပွါးလျှက်ရှိသော ကုလား ရခိုင် အဓိကရုဏ်းနှင့် တပ်ပြေးကုလားများ၏ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုကို တည်ငြိမ်းအေးချမ်းအောင် ဆောင်ရွက်ရန် မောင်တောမြို့နယ်ကို အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူထားသော ဘင်္ဂလီကုလားများ နှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ရပါသည်၊ ၄င်းတို့၏ ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ ဗိုလ်မျိုးညွန့်တို့ ခေါင်းဆောင်သော တပ်စိတ်တစိပ်ကို စေလွတ်၍ ချစ်ကြည်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် စေ့စပ်ကမ်းလှမ်းရန် ကုလားခေါင်းဆောင်များနှင့် စေလွတ်လိုက်လေသည်၊ ယင်းနေ့တွင် ကညင်တန်းကျေးရွာ အူရဒူစာသင်ကျောင်း (ယခု အထကကျောင်းဝင်း ဗလီနေရာတွင် ကုလားခေါင်း ဆောင်းများက ချစ်ကြည်ရေး ထမင်းပွဲ တစ်ပွဲ တည်ခင်းလိုသည်ဆိုဟုဆိုသဖြင့် ထမင်းစားဝိုင်းဝင်စဉ် BIA တပ်ဖွဲ့တွင် ပါလာသော လက်နက်များကို တစ်နေရာတွင် စုပုံထား လေသည်၊ ထမင်းစားနေစဉ်ပင် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသော ကုလားများက ( BIA )ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် အဖွဲ့ကို ၀ိုင်းဝန်းခုတ်ကြသဖြင့် အုပ်ချုပ်သူ တပ်မတော်အရာရှိ နှစ်ဦးနှင့် နောက်ပါအားလုံး သေဆုံးကြရလေသည်။
(၁၉၄၂)ခုနှစ် ကုလား ရခိုင် အရေးအခင်းတွင် (မောင်တောမြို့ မြောက်ပိုင်းတွင် ယနေ့ထိ လုံးဝပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း မပြုနိုင်ဘဲ ပြိုပျက် ပျောက်ဆုံးသွားသော ရခိုင်၊ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်ကျေးရွာများစာရင်း နှင့် အိမ်ခြေစာရင်းမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
(၁) သစ်ပုတ်ချောင်းရွာ--(အိမ်ခြေ ၂၀ )
(၂) ကံပြင်ရွာ----------- (အိမ်ခြေ ၄၃ )
(၃) ရေဖုန်းပြင်ရွာ--------(အိမ်ခြေ ၅၀ )
(၄) ပန်းတောပြင်ရွာ-----(အိမ်ခြေ ၅၀ )
(၅) မောင်ဦးရွာ--------- (အိမ်ခြေ ၃၀ )
(၆) ခွဆုံပြင်ရွာ-----(အိမ်ခြေ ၄၅ )
(ရ) ပြင်ဖြူရွာ-------(အိမ်ခြေ ၄၅ )
(၈) ဒိုးတန်းရွာ------(အိမ်ခြေ ၂၀၀ )
(၉) သက်ကေပြင်ရွာ--(အိမ်ခြေ ၅၀)
(၁၀)၀က်ပိုက်ရွာ---- (အိမ်ခြေ ၆၀)
(၁၁) ကျောက်ချောင်းရွာ( အိမ်ခြေ ၂၅)
(၁၂) ပုဏ်ဏားဆပ် ရွာ(အိမ်ခြေ ၆၀)
(၁၄) ငန်းချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀)
(၁၅) ဒါကြီးစားရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀)
(၁၆)ကျောက်ပြင်ဆိပ်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )
(၁၇)ပြင်ဖြူချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀ )
(၁၈) ရေခပ်ချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀)
(၁၉)ငါးစားကြူးရွာ (အိမ်ခြေ ၆၀ )
(၂၀) ပြောင်ပစ်ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀)
(၂၁)ပြင်ရှည်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )
(၂၂) ဖရုံချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )
(၂၃) ဆင်သေပြင်အထက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )
(၂၄) ဆင်သေပြင် အောက်ရွာ (အိမ်ခြေ၂၀)
(၂၅) သဲဖြူချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )
(၂၆) ပြားသားမဲရွာ (အိမ်ခြေ ၁၅ )
(၂၇) တောင်ဖက်ရွာ (အိမ်ခြေ စာရင်းမရ
(၂၈) ဖေါက်ကျီတောင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )
(၂၉) အထက်ဘော်တူလာရွာ (အိမ်ခြေ ၄၂ )
(၃၀)အင်တူလာရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀)
(၃၁) အင်းချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )
(၃၂) အင်္ဂါဖ ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀)
(၃၃) ကာလာရွာ (အိမ်ခြေ ၈၀)
(၃၄)လဘော်ဝရွာ (အိမ်ခြေ ၃၆ )
(၃၅) ဒုံးကျော်ဖရွာ (အိမ်ခြေ ၂၂ )
(၃၆) သက်ကေပြင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၇၅ )
(၃၇) ဂျိတ်ချိုင် (အိမ်ခြေ ၄၀)
(၃၈)ကိုင်စူးရွာ (အိမ်ခြေ ၂၄ )
(၃၉) တပ်ချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀)
(၄၀) အလယ်ချောင်း (အိမ်ခြေ ၈၂)
(၄၁) မောင်ရွေဇံရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀)
(၄၂) သာဒိုးလှရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀)
(၄၃) တပ်ချောင်းချေရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀)
(၄၄) ဆင်ပြကွင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )
(၄၅) ရွှေဒိုင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၄၆ )
(၄၆)ရေချမ်းချောင်း (အိမ်ခြေ ၄၀)
(၄၇) ငါးချမ်းရွာ (အိမ်ခြေ ၂၃ )
(၄၈) ရဲအောင်စံရဖွေရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )
(၄၉)ကြောင်နဖေ အထက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀)
(၅၀)ကြောင်နဖေ အောက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၂၅ )
(၅၁) ချက်စူရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀ )
(၅၂) အရိုးကျရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )
(၅၃) ကျော်ထွီးချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀)
(၅၄) အင်းချောင်းအထက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၈)
(၅၅)အင်းချောင်းအောက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၂၆ )
(၅၆) ရွှေဖီဦးဖရွာ (အိမ်ခြေ ၂၅ )
(၅၇)ထောက်ကလန်ရွာ (အိမ်ခြေ ၈၈ )
(၅၈)တောင်ပြိုလက်ဝဲရွာ (အိမ်ခြေ ၁၆ )
(၅၉) တောင်ပြိုလက်ယာရွာ (အိမ်ခြေ ၂၈ )
(၆၀)ဒေးတန်းညာ (ရခိုင်ရွာ) (အိမ်ခြေ ၂၂)
(၆၁) ကွမ်းသီးပင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၁၂ )
(၆၂) ကျမ်းထောင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၁၅ )
(၆၃) တန်းချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၁၈ )
(၆၄) စံထွန်းဦးရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀ )
(၆၅) အရှေ့ ခမောင်းဆိပ်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၅ )
(၆၆) အနောက်ခမောင်းဆိပ်ရွာ (အိမ်ခြေ ၂၅ )
(၆၇) သူလူတောင် အထက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀ )
(၆၈) သံခုံရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )
(၆၉) မဖြူမရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀)
(၇၀) ကုံးတက်ရွာ (အိမ်ခြေ စာရင်းမရ )
(၇၁) ခင်ပြိုသားရွာ (အိမ်ခြေ ၆၀)
(၇၂)ရွှေငင်ချောင်းအထက်ရွာ(အိမ်ခြေ ၄၀ )
(၇၄)သစ်တုံးနားရွာ (အိမ်ခြေ ၆၀)
(၇၅) ပန်းရွှေအောင်ဖရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀ )
(၇၆) ရွှေလှခိုင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀)
(၇၇) တမန်းသားရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀)
(၇၈)ချဒိုးရီရွာ (အိမ်ခြေ ၁၅ )
(၇၉) သာအောင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )
(၈၀)လောင်းပတ်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀)
(၈၁) ၀က်ကျိန်းရွာ (အိမ်ခြေ ၁၀၀ )
(၈၂)ကြက်ကျိန်းရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )
(၈၃) ကျွဲသဘောက် အထက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၅ )
(၈၄) ကျွဲသဘောက် အောက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၆၀ )
(၈၅) ကျောက်တန်းရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀ )
(၈၆)စိမ့်တောပြင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )
(၈၇) ဂေါ်ဒူရ အထက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၂၅ )
(၈၈) ဂေါ်ဒူရ အောက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၆၅ )
(၈၉) ကျွန်းပေါက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၅ )
(၉၀) တရိမ်းရွာ (အိမ်ခြေ ၁၅၀ )
(၉၁)တင်သာရရွာ (အိမ်ခြေ ၂၅ )
(၉၂)သဲချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၆၅ )
(၉၃) ငှက်ပျော့ချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၄၅ )
(၉၄)ငါးစံဘော်ရွာ (အိမ်ခြေ ၈၀ )
(၉၅) လက်ဖွဲကျရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀)
(၉၆) ကျောက်ချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀ )
(၉၇)ရဲအောင်ချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၇၀)
(၉၈) ရေနောက်ငါးသားရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀ )
(၉၉) မီးကျောင်းချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၁၅ )
ကိုးဆယ့်ကိုးရွာရှိ ရခိုင်နှင့် ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်များမှာ ဘင်္ဂလီကုလားယုတ်တို့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ကြရသည့်အပြင်၊ သူတို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသော လယ်မြေ၊ ဥယျာဉ်၊ ခြံ၊ နှင့် အိမ် ကျွဲနွား ယာဉ်များစွာတို့ကို ဆုံးရှုံးလက်လွတ်လိုက်ကြရလေသည် ၊ ထိုထိုသော ကျေးရွာများမှ သက်ရှိဆိုလို့ ကြက်တစ်ကောင်တောင် အပြင်ကို ထွက်မရကြဘဲ သေပွဲဝင်ခဲ့ကြရသည်။
ယင်းအပြင် ရွာလုံးကျွတ် ဘင်္ဂလီကုလားများသတ်ဖြတ်ခံရ၍ အိမ်ခြေအလိုက် စနစ်တကျ ကောက်ခံရှာဖွေ မရရှိသော ကျေးရွာများမှာလည်း အလွန်များပြားသည်ကို တွေ့ရပါသည် ၊
စုစုပေါင်း ရွာပေါင်း (115)ရွာတို့သည်
အိမ်ခြေစာရင်းအတိအကျမရဘဲ ကုလားများမီးရှိုဖျက်ဆီးခြင်းခံရသော ရခိုင်နှင့် ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်ကျေးရွာများဖြစ်ကြသည်။
မောင်တောမြိ့နယ်မှ (ယခု ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့နိုင်ငံ) ဖက်သို့ ရောက်သွားသည့်ရခိုင်၊ရခိုင်မျိုးနွယ်စုများကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒိုင်နာခ်ျပူ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ထားရှိပြီး ဂျပန်ကို တိုက်ထုတ်ပြီးမှ တိုင်းပြည် ပြန်လည်အေးငြိမ်းသည့်အခါ 1945 ခု ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှသာ တစ်ဖြည်းဖြည်း မိမိတို့ဒေသသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြသည်ဟု သိရပါသည်။
ကုလားကို ယုံကြ ၊သနားကြ ၊ ကုလားဆိုင်က ၀ယ်စားကြ ၊ကုလားရောင်းသောပစ္စည်းကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲကြမည်ဆိုလျှင် ထိုထက်ဆိုးသော အဖြစ်သို့ ရောက်ရအုံးမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အထက်ပါ(1942 )အရေးအခင်းတွင် ရခိုင်လူမျိုးများသာ အသတ်ခံရသည် ရခိုိင်ပြည်ပျောက်မသွားသေးပါ ၊ကုလားများ ၄င်းအချိန်က စီးပွါးရေးအားမကောင်းသေး ပါ။ နောင်ဖြစ်လာမည့် အရေးအခင်းရှိလာလျှင် ကုလားများသည်စီးပွါးရေးအားကောင်း၊ မီဒီယာအားကောင်း၊စည်းရုံးအားကောင်း၊ နိုင်ငံတကာအကူအညီအားကောင်းလာသောကြောင့်
မြန်မာတိုင်းရင်းသားနှင့် ရခိုင်များမစည်းရုံးသော်၎င်း၊ နိုင်ငံတော်က တိကျခိုင်လုံသော လုံးခြုံသော အစီအမံများ မချမှတ်နိုင်သော်၎င်း ရခိုင်ပြည်ပါ ပျောက်သွားနိုင်သည့် အခြေအနေ သို့ ရောက်သွားနို င်ေ ကြာင်း သင်္ခန်းစာယူနိုင်စေရန် ရှာဖွေတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
Credit Theik fuar @ Facebook
Posted by ဇာမဏီ at 12:35 PM
Labels: ဘဂါင်္လီတို.အကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်း, သမိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ များ
How.. Who and What Happen Now ? (32)
စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ လက်နက် ယာဉ် စနစ်နှင်. စာစုများ (99)
နိုင်ငံတကာ Hot News (9)
မြို.လေးနှင်. ပတ်သက်ဖွဲ.သီ စာပန်းချီ (49)
ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်း (54)
မြောင်းမြ အထက ခွဲ ကျောင်း သရဲပူးကြခြင်းရဲ. နောက်ခံ...
၀ါးခယ်မ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် တစ်ကိုယ်တည်း အမျိုးသမီးကြီးမ...
Myanmar Navy Seal တပ်ဖွဲ.၀င် ဖြစ်လိုပါသလား
မြန်မာကားမကြိုက်သူများ တွေ့ဆုံပွဲ Page အပေါ် အနုပညာ...
၁၉၄၂ ရခိုင်ပြည်နယ်ဂျီဟတ်လုပ်ခံရစဉ်က - ခိုးဝင်ဘင်္ဂါ ...
ဦးဇင်ဝိုင်း ရဲ. ရှင်းလင်းမှုကို တုန်.ပြန်ကြသူများ...
Facebook ပေါ်က ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ. ပေါက်ကွဲသံ နဲ. ပရိသတ...
နွေးနွေး ပြောတဲ့ ဆရာ ဦးပေါ်အေး
သူ.သမီးပြောတဲ့ သူ.အဖေအကြောင်း - ဆရာဦးပေါ်အေး
ဘိုဘိုမင်းထွန်း ရဲ. ဆရာ ဦးပေါ်အေး ( ၃ )
ဒေါက်တာသက်ရှည် ရဲ. ကိုပေါ်အေး
ဒေါက်တာသင်းမာလာ ပြောတဲ့ ဆရာ ဦးပေါ်အေး
ဖြိုးဝေပြောတဲ့ ဆရာ ဦးပေါ်အေး
ဆရာ ဦးပေါ်အေး အသက် ၆၄ - ဇော်မင်းလွင်
ကျွန်တော်သိသော ဆရာ ဦးပေါ်အေး - ဇော်မင်းလွင်
အောင်မင်းထွဋ် ပြောတဲ့ ဆရာ ဦးပေါ်အေး နောက်ဆုံးအချိန...
ဘိုဘိုမင်းထွန်း ပြောတဲ့ ဆရာ ဦးပေါ်အေး ( ၂ )
ခိုင်သန္တာအောင် ပြောတဲ့ ဆရာ ဦးပေါ်အေး
ဘိုဘိုမင်းထွန်းပြောတဲ့ ဆရာ ဦးပေါ်အေး
Hot Filipina Woman 2019
ကျွန်းစုမြို့နယ်၌ သမက်ဖြစ်သူက ယောက္ခမဖြစ်သူအား ဓားဖြင့်ထိုး၍ သေဆုံး - ကျွန်းစု ဩဂုတ် ၁၇ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကမ်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဘင်းချောင်းကျေးရွာ၌ ဩဂုတ် ၁၆ ရက် ည ၉ နာရီ ခန့်က သမက်ဖြစ်သူမှ ယောက္ခမဖြစ်သူ...
နရေပျစှနျ့ခှာသူ ၃ ထောငျကြျော သွဂုတျလအတှငျး စတငျ လကျခံမညျဟု သမ်မတရုံး ပွော - ဘင်ျဂလားဒရှေျ့သို့ ရောကျရှိနသေညျ့ နရေပျစှနျ့ခှာသူမြားထဲမှ ၃ ထောငျကြျောကို သွဂုတျလအတှငျး စတငျ လကျခံရနျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ဘကျသို့ ပွောဆိုထားကွောငျး The post န...
Hailey သာမရှိရင် လမ်းတွေပျောက်နေမှာလို့ပြောလိုက်တဲ့ Justin Bieber
သရက်သီးမှည့် စားခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများ
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ကောင်မလေးတွေဆီမှာ သေချာပေါက် ချစ်သူကောင်လေးကို အသဲယားစေတဲ့ အပြုအမူလေးများ
တိုက်ပွဲတွေ ကျယ်ပြန့်မလာဖို့ ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုနေသလဲ - သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၉ - မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ပေါင်းပြီး ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့ တပ်မတော် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်နဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ နောင်ချိုမြို့တွေမှာ တိုက...
ရှမျးမွောကျတိုကျပှဲတှေ က ဘယျကို ဦးတညျနသေလဲ - ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျးကမွို့ ၄ မွို့ မှာ သွဂုတျလ ၁၇ ရကျနကေ့ တိုကျပှဲတှေ ဆကျဖွဈပှားခဲ့ပွီး လူတဈဦးသဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
ရဘေေးသငျ့ပွညျသူမြားအတှကျ ရုပျရှငျအစညျးအရုံးက သိနျး ၂၆၀ ကြျော လှူဒါနျး - မွနျမာနိုငျငံတဝှမျးလုံးရှိ ရဘေေးသငျ့ပွညျသူတှေ ပွနျလညျထူထောငျရေးဆိုငျရာ အတှကျ ရညျရှယျပွီး မွနျမာနိုငျငံရုပျရှငျအစညျးအရုံးနှငျ့ အနုပညာရှငျတှေ စုပေါငျးပွီး သိ...
တရားစွဲခံရသူ နော်အုန်းလှနှင့် လူငယ် ၂ဦးအား ၀ိုင်းရံကူညီပေးရန် KNU concerned group ထုတ်ပြန် - သြဂုတ် ၁၇ရက်၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်။ ကေအိုင်စီ ၆၉နှစ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သူ KWU-ကရင်အမျိုးသမီး အစည်းအ ရုံးမှ နော်အုန...
Salai Tin Maung Oo - https://drive.google.com/file/d/1h4D-uz5xyi0A9CSR3-CXGAQs0b6lESjP/view?usp=sharing ချင်းလူမျိုးများအတွက်သာဆုံးရှုံးခြင်းမဟုတ်ဘဲ မြန်မာ တစ်မျိုးသားလုံးအတွ...
Donald Trump သက်တမ်းပြည့်မလား (A KP Appraisal) - အ​မေရိကန်​သမ္မတ ​Donald Trump ရဲ့လက်​ရှိတာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​​နေတဲ့ သမ္မတသက်​တမ်းဟာ 2021-ခုနှစ်​၊ Jan- လမှာ ပုံမှန်​အားဖြင့်​ ကုန်​ဆုံး​တော့မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​…။ ဒ...
ဒါကတော. ဟင်းနုနွယ် ရွက်ရဲ. အာနိသင်တွေပါ
ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကို အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရသလို ဈေးလည်း သက်သာတာကြောင့် လူတိုင်းလိုလို စားနိုင်ကြပါတယ်။ လူတွေ အများအားဖြင့် စားလေ့ရှိကြတဲ့ ဟ...
ဘဝကို စာသင်ခန်းထဲသိမ်းထားတယ် ငယ်စဉ်ကတည်းက အမိ မဲ့ခဲ့ရသော တောနက်မည်းကြီးမှာ အဘွားရဲ့မေတ္တာအောက်မှာ လူလားမြောက်ခဲ့တယ်. . . . ဆိုတေ...
ဆီဒိုးနားဟိုတယ် Video File အကြောင်း
ဇာတ်လမ်းအစ ကတော့…. ဆီဒိုးနားသို့taxi လည်း ရောက်ခဲ့လေတော့ ကောင်တာကိုသွားပြီး ကောင်တာက ကောင်မလေးကတော့ အပြုံးများစွာနဲ့မိတ်ဆက်ပီး ID ...
ကြို့ပင်ကောက်မြို့မှ နတ်လေချွန် သို့ လေချွန်နတ် - သက်နိုင်စိုး
အချိန်က ၁၉၈၅ ကပါ ကျနော် ၁၀ နှစ်သားအရွယ်မှာပေါ့ ။ ကျနော့်အမေဟာ ကျနော် ၆ နှစ်သားမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ် ။ကျနော့်ဦးကြီးက ဦးဆောင်ပြီးကျေ...
လွမ်းဆွတ်မိသည် မြို. ကလေးက ငယ်ဘ၀များဆီ
( 1980 မှ 1995ခုနှစ်ကြားထဲမှာမွေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေများရှိရင် ခဏလောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါလား... ခဏလောက်လွမ်းရတာပေါ့ ) ...
လီကွမ်ယု စင်ကာပူနိုင်ငံ ချမ်းသာသောနိုင်ငံဖြစ်အောင် ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့သော လီကွမ်ယု-သည် လီမျိုးနွယ်ဝင် ဟတ်ကာတရုတ်လူမျိုးမှ ဆင်းသက်လာသြူ...
ဦးရွှေမန်း အကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်း
ပြည်သူလူထုထံသို့ ❖ စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ စာနာမှုများဖြင့် မိမိအားမေးမြန်းကြသည့် ပြည်သူများအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ❖ ပြည်သူလူထု၏...
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်တကယ်ရှိလား။ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်အကြောင်းဖတ်ချင်တယ်ဆိုသူတွေအတွက်ပါ။ြ မန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးမရသေးဘူး ကိုအောင်ဆန်းတို့ကို အာ...
မြန်မာအပြာကားတွေပဲ ထွက်လာမလား ၊ ၂၉၂ / ၂၉၃ နဲ.ပဲ ၀င်ရမလား
ညစ်ညမ်းစာရေးဆရာ အောင်ရင်ငြိမ်းရဲ့ အပြာစာအုပ် ရုပ်ရှင်ရိုက်မည့်သတင်း ဝေဖန်မှု မြင့်တက် ရိုမန်ဘော့ထ်တွေရဲ့ ကမ္ဘာ အမည်ရှိ အပြာစာအုပ်က...
Myanmar NAVY SEAL တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ချင်ပါသလား ? လိုအပ်သည်များ၊ သင်တန်းအကြောင်းအနှစ်ချုပ် နှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ Navy Seal သင်တန်းတတ်ရ...
ခရီးသွားမက်တဲ့ ကောင်မလေးကို ချစ်မိသောအခါ - ခရီးချည်းပဲသွားချင်နေတဲ့စော်လေးများ သင်တို့ဆီမှာရှိပါလား။ ပြီးတော့ ခရီးပဲသွားနေလို့ ကိုယ်နဲ့ တွေ့ချိန်နည်းတာမျိုးတို့ ဒါမှမဟုတ် ခရီးသွားဖေ်ာအဖြစ်နဲ့ လိုက်ေ...
မန္တလေး - နောင်ချို-လားရှိုးလမ်းမှ မိုင်းခွဲခံထားရသည့် ဂုတ်တွင်းတံတားပြုပြင်နေစဉ် (၉)မိုင်ခွဲ - ကျောက်ဂူလမ်း အသုံးပြုသူများနေ
ပညတ် မှာရပ် - ဒုက္ခပတ် တဲ့ ကမ္ဘာ
"အိပ်မက်တွေ မိုးထားတဲ့ အိမ်" ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ တွေ့ရမဲ့ အဝင်းနဲ့ ချီချီ
'VAR was takingacoffee' - Guardiola frustrated by refereeing inconsistencies - After seeing his team deniedaseemingly clear penalty at the Etihad Stadium, the City manager called for more consistency in applying the technology